Amino Acids, Chikafu chekuwedzera, Chemishonga Chemukati - Haiti
Big Discount Glycine Isina Kukosha Amino Acid -...
Yedu yekugadzira musangano inovakwa zvinoenderana neGMP zviyero, neepamberi zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvehunyanzvi zvekuongorora uye yakakwana inotungamira manejimendi system. Yakawana hunyanzvi hwakawanda kusanganisira rezinesi rekugadzira (SC), ISO22000, ISO 9001: 2015, HACCP, Kosher, Halal, nezvimwe.
Iyo kambani inosuma yakawanda nhamba yematarenda, inotsvaga mapurojekiti uye ine basa kune vatengi
Cosmetic Kudya Chemical Injiniya
Animal feed chirungiso
Chemical Injini yekuwedzera
Makore makumi maviri ruzivo rwekugadzira mhando yepamusoro amino acids
Kuendesa kunze kwenyika dzinopfuura makumi matanhatu nenzvimbo pasirese
Kugovera kune anopfuura 1500 vatengi pasi rese
Wide Chigadzirwa Range Iyo Inosanganisira Anopfuura Anopfuura zana Mhando dzeAmino Acids
3 makuru masaiti ekugadzira kugadzira chikafu & pharma giredhi amino acids
kugadzirwa, kudzidza uye kutsvagisa
272020 / Chikunguru
Kubva Kurume 18 kusvika 20, kambani yedu yakapinda FIC 2019 yakaitirwa muShanghai kamwe pagore. Chiratidziro ndechimwe chekuratidzira kukuru muindasitiri yemishonga, nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu. Kubudikidza nekutora chikamu uku, isu tine mukana wekutaurirana takatarisana nezvakawanda ...
182020 / Chivabvu
Kubva June rechi20 kusvika rechi22, kambani yedu vakapinda CPHI pashoo yakaitirwa Shanghai kamwe pagore. Chiratidziro ndechimwe chekuratidzira kukuru muindasitiri yemishonga, nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu. Kubudikidza nekutora chikamu uku, isu tine mukana wekutaurirana takatarisana ...